XFCE Gaarka ah: Qodobbada Ugu Xiisaha Badan | Laga soo bilaabo Linux
Haddii aad isticmaaleysid XFCE Maqaalkani wuxuu kugu habboonaan doonaa adiga. Dhexdeeda ayaan ku soo uruurineynaa dhammaan waxyaabaha lagu daabacay bartayada ku saabsan tan Deegaanka Desktop taasi waxay xiiseyn kartaa akhristayaasha.
Talooyin: Sida loo sameeyo Xfce oo la mid ah KDE
Xfce Christmas: Mawduuc kirismas ah oo loogu talagalay miiskeena
Boomerang Gtk, oo ah mawduuc aad u qurux badan oo loogu talagalay Gnome iyo Xfce
ZukiMac: Mawduuc libaax leh oo loo yaqaan 'Xfwm'
Astaamaha Pokémon ee XFCE
Xfce Desktop Icon Transparencies
La cusbooneysiiyay Mawduuca GreyBird Gtk ee Xubuntu 12.10
Ku habee liiskaaga LXDE iyo xitaa Xfce oo leh LXMEd
Qor si dib loogu bilaabo loona soo celiyo kalfadhigii Xfce
Wbar: Meel aad ufudud oo loogu talagalay Openbox, Fluxbox ama Xfce
Ku beddel Gedit med-ga Xfce
U codee kor iyo hoos adigoo adeegsanaya kiiboodhka 'Xfce' oo leh amixer
Whisker Menu: Hagaaji liiska dalabka Xfce
Waxyaabaha aan sameeyo kadib rakibida LMDE Xfce
Baro Xfce si qoto dheer iyada oo ay ugu wacan tahay kaalmadaada
Talooyin: Ku xalli qaladka daaqadaha ku yaal Xfce4
Ku beddelashada guddiga Xfce Tint2
Dayactir shilka markaad ku shubaneyso liiska codsiyada Xfce
Sida loo rakibo Xfce ArchLinux
Ku isticmaal wakiil wakiil Openbox, Fluxbox, LXDE, Xfce iyo wixii la mid ah
Qaybinta loo hibeeyay ama la taageeray Xfce
Waxaan ku hayaa jiir kumbuyuutarkeyga: Xfce Guide
Ku muuji waxaad ku maqashay DeadBeef ee ku yaal Dashboardka 'Xfce Dashboard'
Hagaaji qaladka: Cilad raadinta astaanta: /usr/lib/libgtk-x11.2.0.so.0 gudaha Archlinux
Ku beddel Thunar iyo Xfdesktop Nautilus gudaha Xfce
Windows AeroSnap ama saamaynta Grid ee Xfce
Beddelka Xfrun ee GMRun ee Xfce
[Sida loo] U istcimaalo guddiga Xfce sidii xamuul fudud oo wax ku ool ah
5 siyaabood oo dib loogu cabbiro daaqadaha Xubuntu ama Xfce
Diiwaanka rakibida: Debian + Xfce 4.10
Ugu magacaw faylasha badan Xfce 4.10
[HOW-TO] Sida loo sameeyo Whisker Menu oo lagu furo furaha Windows ee Xfce
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » XFCE Gaarka ah: Qodobbada Ugu Xiisaha Badan
Way badan yihiin! sidii loogu samayn lahaa qayb gaar ah baloogga 🙂
Ammaan! kuwa naga mid ah ee isticmaala xfce (oo aan fikrad badan haysan) boostadani waa mid si fudud u sharaf leh! aad ayaad u mahadsantahay.
Fikrad aad u fiican in dib loo eego qodobbadayada oo lagu soo ururiyey bay'ad desktop ah!
Kaliya waxaan tijaabinayaa Mannjaro XCFE marka tilmaamahan aniga ayey igu fiican yihiin 😛
soo uruurinta boostada oo aad u fiican, haha ​​xitaa midka KDE-ga ayaa dareenkeyga qabta laakiin waxaan u maleynayaa inaan wali daacad u ahay jiirka: D.
Waxaan eegay qaar ka mid ah qoraaladaas midkoodna wuxuu ka yimid… Geesi! Waxay iga dhigtay nostalgic: markii uu DesdeLinux bilaabay waxaan ka mid ahaa dhowrka qof ee sida joogtada ah ugu shaqeysta barta waxaan marwalba saxaa qaladaadka qorista iyo higgaadda. Iyo geesinimadaas, intee buuq ahayd !, hehe heh. Aad ayuu u xun yahay isagu wuu is eryay. Ilaa hadda waxaan ka helay laba ka mid ah ra'yigeyga labo sano ka hor (sida dhakhsaha badan waqtiga u duulo!).
Adigana, nostalgia badan: Waxaan u xiisay maqaalladaada Xfce waxbadan. Waxaan xasuustaa sugitaankii dheeraa ee Xfce 4.10. Had iyo jeer, waxaad nala wadaagtay wararkii ugu dambeeyay iyo wixii cusbooneysiiyay. Waqtigan xaadirka ah waxaan la yaabanahay waxa dhici doona 4.12, goorma ayey noqon doontaa, maxay soo celin doontaa markale. Aad ayaan ugu faraxsanahay xubintayda iyo Xfce 4.10, laakiin mar dambe damac uma lihi nooca cusub.
Sida had iyo jeer Elav, aad ayaad ugu mahadsan tihiin dhammaan shaqooyinka ay idinka, Gaara, iyo xubnaha kale ee kooxdu qabtaan. Runtii waan ku qanacsanahay waxa ay qabtaan waxaanan rajeynayaa inay sii wadi doonaan inay sii wadaan wax badan.
Goor dhow ayaan is arki doonaa,
Si buuxda ayaan u fahmay waxaad leedahay. Mararka qaar waxaan bilaabaa akhrinta qoraaladii hore ee AfterLinux waxayna iga dhigeysaa mid aad u xiiso badan inta aan soo soconay, imisa waxyaalood ayaa isbadalay, sifiican, wax walboo. Waxyaabaha geesinimada leh haa, waa ceeb laakiin taasi waa nolosha.
Waad ku mahadsantahay wali inaad nala joogto.
Just weyn! Aad ayaad u mahadsantahay!
Ku jawaab Nahu
20 iyo 22 waa isku mid
Ku rakib VLC 2.1.x Ubuntu 12.04 iyo derivatives